समीक्षा - स्मार्टमे
डोम » समीक्षा
किन्नु अघि, यो उपकरणको विश्वसनीय समीक्षा पढ्न लायक छ। हामी सब भन्दा चाखलाग्दो समाधान र ग्याजेटहरू - क्यामेरा, सेन्सर र अन्य घरेलु उपकरणहरूको परीक्षण गर्दछौं जुन तपाईंको घर स्मार्ट बनाउँदछ। हामी विभिन्न मूल्य सल्फरबाट कम्प्युटर उपकरणहरूको मूल्यांकन गर्दछौं।
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि तपाईंलाई सिसा चाहियो भने? के यो लगानी गर्न लाभदायक हो? र यदि हो भने, के? आजको समीक्षामा म तपाईंलाई रंगीन नेतृत्वको पट्टीको बारेमा बताउनेछु, अर्थात Meross स्मार्ट एलईडी प्रकाश पट्टी ...
जिमी JV85 प्रो वैक्यूम क्लीनर। तपाईंको जन्मदिनको लागि हिट उपहार? छुट्टिहरु? विवाह? आउनुहोस् पत्ता लगाउनुहोस्!
जिमी, जिमी JV85 प्रो, ठाडो भ्याकुम क्लीनर, proscenic, Puron, Puron P11, viomi, बायोमी A9
जन्मदिन, छुट्टिहरु र अन्य अवसरहरु कहिलेकाँही आफैंलाई उपहार दिन को लागी पर्याप्त कारण हो। यदि यसका लागि कुनै विचारहरू छैनन् भने, यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा सुधार गर्न सक्ने कुरा विचार गर्न लायक छ। यहाँ सबै प्रकारको मद्दत तपाईंको सहयोग गर्न आउनेछ ...
BleBox द्वारा एक्शनबक्स। तयार हुनुहुन्छ? सेयर गर्नुहोस्!
आज, BleBox बाट एक्शनबक्सको छोटो समीक्षा, किनकि कार्य संक्षिप्त र छोटो हुनको लागि छ! र यदि तपाईंले मेरो अघिल्लो BleBox प्रविष्टिहरू पढ्नुभयो भने, तपाईंलाई सायद पहिले नै थाहा छ कि मैले यी उपकरणहरू धेरै मन पराएको थिएँ। पहिले, तपाईं सक्नुहुन्थ्यो ...
KiCA Masażer - केहि जो सबैको लागि उपयोगी छ
किसीए मालिजर एक उत्पादन हो जसले हामीलाई हाम्रो मांसपेशीहरू आराम गर्न अनुमति दिनेछ। कसलाई यसको आवश्यक पर्दछ? लगभग सबैलाई! समीक्षाको लागि समय!
Neatsvor x500 - PLN 500 को लागि भ्याकुमिंग रोबोटको समीक्षा
neatsvour, NEATSVOR X500, भ्याकुम क्लीनर
Neatsvor X500 वैक्यूम सफाई रोबोटको नाम र मूल्यमा नम्बर has०० छ। त्यसोभए यदि तपाईं आफ्नो रोबोट खरीदमा बचत मालिक बन्न चाहानुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईंको लागि हो!
WE.LOCK - भाँडा र विधानसभा गाइडका लागि स्मार्ट लकको समीक्षा!
gerda, स्मार्ट लक, tedee, we.lock, लक
स्मार्ट लकहरू बढ्दो रूपमा हाम्रा घरहरूमा देखा पर्दैछन्। तर यो फरक छ। यो भाँडामा राम्रो काम गर्दछ। र मैले सम्पादन हालै नदेखाएकोले, आज यो 😀 हुनेछ
समीक्षा, स्मार्ट महिला
inFace Cavitation Peeling - समीक्षा
inface, cavitation छीलो
आज, स्मार्ट महिलाको लागि एक चलचित्र! काभेटेशन पीलिंगको समीक्षाको लागि समय सोबिजले तयार गरेको इनफिक्सबाट! यो ठोस हुनेछ, यो आधुनिक हुनेछ, यो चाखलाग्दो हुनेछ 😉
iHealth Fit - iHealth द्वारा स्मार्ट वेट समीक्षा
घरमा बस्ने एक वर्ष। टाढाको काम, नेटफ्लिक्सको रूपमा मनोरन्जन र सोफामा खाजा खाने। असर? पूर्वानुमान गर्न सजिलो‼ त्यसैले तपाईंले आफ्नो जीवनमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ! मैले वजनको साथ शुरू गरेको छु र आज iHealth Fit को समीक्षा गर्दैछु!